Proverbe 2091 Fihinan' akotralahy : ny mahamay tsy tsofina, ny mangatsiaka tsy hafanaina . [Rinara 1974 #1157]
Fihinan’ ankotralahy : ny mafana tsy tsofina, ny mangatsiaka tsy afanaina . [Cousins 1871 #957]
Fihinan' ankotralahy : ny mafana tsy tsofina, ny mangatsiaka tsy hafanaina . [Veyrières 1913 #2077]
Proverbe 6465 Salasala hoatry ny akotralahy miakanjo jaky : hoharabaina , tsy andriana ; havela ihany, miakanjo jaky . [Veyrières 1913 #4090]
Proverbe 7102 Toy ny akotralahy : mibaby ny omby nohaniny , ka taitry ny ondry nandrasany , miloloha ny akoho nompiany . [Rinara 1974]